Antony 4 tsy misy laharana amin'ny Google ny tranokalanao sy ny fomba fanamboarana azy - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics
Miverina amin'ny blôgy
Antony 4 tsy misy laharana amin'ny Google ny tranokalanao sy ny fomba fanamboarana azy
By Ekipa NGA
Amin'izao fotoana izao, na ny orinasa efa niorina tsara aza dia efa mandray Fanovàna dizitaly ho ampahany amin'ny paikady ara-barotra sy marika. Ny hafainganam-pandeha faran'izay haingana izay hidiran'ny mpifaninana sy ny orinasa ao amin'ny tontolo nomerika dia midika fa na ny teratany nomerika aza dia tsy maintsy mijery sy manavao ny paikadiny matetika kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny orinasa dia tsy maintsy miasa tsy an-kijanona amin'ny fampiasana ireo tombony maro amin'ny nomerika ary mifikitra amin'ny fomba mavitrika mba hametrahana ny marika amin'ny aterineto. Ho an'ny orinasa sasany, na dia manana laharam-pahamehana matanjaka sy olona mahay ao anaty sambo aza, ny filaharana amin'ny Google na ny fiakarana amin'ny sehatra folo ambony ao amin'ny SERP dia mety ho fanamby. Mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny tranonkala fifamoivoizana, famoronana fitarihana, marika ary ROI an-tserasera.
Nahoana no ilaina ny mametraka laharana eo amin'ny pejy voalohany amin'ny Google?
Oviana ianao no nitsidika ny pejy faharoan'ny Google SERP mba hahazoana valiny amin'ny fanontanianao? Mety tsy hanana izany mihitsy ianao, sa tsy izany? Raha ny marina, ny tatitra dia milaza fa ny 1 isan-jaton'ny olona ihany no tena mankany amin'ny pejy faharoa amin'ny Google. Ary koa, miaraka amin'ny fanavaozana vao haingana avy amin'ny Google, toy ny valin'ny fikarohana natao sy ny fanavaozana Google MUM, ny fikarohana dia hanao laharam-pahamehana ny valiny mifandraika amin'ny pejy voalohany.
Tsy voatery hitsidika ny pejy faharoa mihitsy ianao na hampiditra indroa ny fanontanianao miaraka amin'ny teny fototra hafa mba hahazoana valiny marina. Izany no antony maha-zava-dehibe izao ny fananana ny anao raharaham-barotra tranonkala laharana voalohany amin'ny Google. Ary koa, azo antoka fa fantatrao ny tombontsoa tsy tambo isaina amin'ny laharana eo amin'ny pejy voalohany. Ny orinasa manana laharana ambony dia manana vintana tsara kokoa ho hitan'ny mpanjifa mety, afaka mampitombo be ny tombom-barotra izy ireo, mahazo ROI tsara kokoa amin'ny azy ireo. Hafanàm-po an-barotra fampiasam-bola, manangana fahefana marika ambony kokoa, ary indrindra mandresy ny fifaninanana.
Ka raha tsy te-hamerina ny fitarihana mahafeno fepetra sy ny fidiram-bola ianao. Fantaro ireo lafin-javatra voalaza etsy ambany izay mety hisy fiantraikany amin'ny anao tranonkala filaharana ary amboary ASAP, na azonao atao mihitsy aza ny manakarama a Hafanàm-po an-barotra ary asaivo manao izany ho anao izy ireo.
Nahoana ny tranokalanao no tsy manana laharan'ny Google Search Engine?
1. Tsy voatanisa ny tranokalanao
Mba hahafantaran'i Google fa ny anao tranonkala misy, tokony handady ny pejinao aloha izy ary avy eo hanondro ireo valiny ireo. Amin'izay ihany ny anao tranonkala popup rehefa misy olona mitendry ny anao tranonkala anarana na teny fototra, satria Google no hisintona ny valiny avy amin'ny index.
Raha ny raharaham-barotra tranonkala dia somary vaovao ihany, mety haka fotoana hanaovana index ary mety ho antony iray tsy hiseho amin'ny Google ny tranokalanao.
Ahoana no hamahana izany?
Afaka manomboka amin'ny famoronana kaonty ho an'ny anao ianao tranonkala ao amin'ny Google Search Console. Amin'ny fampiasana ity kaonty ity dia azonao atao ny mitarika an'i Google mankany amin'ny sitemap.xml ary manendry azy handady sy hanondro ny fonenanao. Azonao atao ihany koa ny mijery ny marika "tsy misy index" ao amin'ny tranokalanao tranonkala kaody loharano sy robots.txt mba hahazoana antoka fa azon'ny Google bots mahita, mandady ary manisy marika ny pejinao rehetra. Ny rakitra robots.txt dia afaka manakana ny Google crawlers tsy handady ny pejy anatiny ao amin'ny anao tranonkala, koa ataovy izay hahazoanao antoka fa tsy avelanao ho diso ny pejy tianao hasiana laharana.
2. Mety hisy sazy ny tranokalanao
Ny sazy an-tserasera an'i Google dia afaka manakana anao koa tranonkala avy amin'ny laharana amin'ny SERPs. Ataovy azo antoka fa mahafeno ny torolalana momba ny kalitaon'ny Google ny fonenanao, raha tsy izany dia mety handrara vonjimaika na maharitra ny fonenanao tsy ho laharan'ny Google.
Ny ankamaroan'ny sazy dia mifototra amin'ny fanavaozana algorithm Google roa lehibe: Penguin sy Panda. Ny sazy Penguin dia mamaritra ireo sehatra izay mampiasa SEO satroka mainty sy teknika fananganana rohy raha mikendry ny Panda tranonkala miaraka amin'ny "manify afa-po.” Raha te hahalala raha voasazy ianao na tsia, dia azonao atao ny mijery ny Google Search Console raha mila fanairana.
Raha hitanao fa anao tranonkala voasazy, dia mila manao dingana mifanaraka amin'izany ianao hanesorana ireo sazy ireo ary hanavao ny sainao tranonkala ka voasakana ny sazy ho avy. Ataovy azo antoka fa miala amin'ny teknikan'ny SEO satroka mainty ianao ary mifantoka amin'ny teknika White Hat fotsiny ary mifanaraka tsara amin'ny torolalan'ny Google.
3. Mety tsy ho tsara ho an'ny traikefa amin'ny pejy ny tranokalanao
Miorina amin'ny fanavaozana Pejy Experience vao haingana, Google dia hanome laharam-pahamehana bebe kokoa tranonkala izay mahafeno ny telo Core Web Vitals. Raha ny tranonkala dia tsy optimized tsara ary tsy afaka manome mpitsidika mahomby tranonkala traikefa, dia ho sarotra aminao ny mametraka ny sehatra misy anao.
Ataovy azo antoka ny anao mahafeno ny Google Core Web Vitals ny tranokala. Ny loko misy votoaty lehibe indrindra (LCP), ny fiovan'ny layout (CLS) ary ny fanemorana ny fampidirana voalohany (FID) dia hampiasaina handrefesana ny fahombiazan'ny iray. tranonkala. Mba hanarahana ireo fanavaozana ireo dia mila miantoka ianao fa ny anao tranonkala mandeha haingana kokoa, mamaly haingana amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa, ary miorina amin'ny navigateur rehetra na sehatra. Afaka manakarama a orinasa mpamorona tranonkala ao Toronto manampy tranonkala famaliana, hafainganam-pandeha tsara kokoa, UI/UX nohatsaraina, sns.
4. Mifaninana loatra ny tenimiafinao
Fantatsika rehetra izany afa-po dia mpanjaka ary tsara izany, eny SEO-optimized votoaty tranonkala afaka manampy ny anao raharaham-barotra laharana amin'ny Google haingana kokoa. Saingy raha mifantoka amin'ny teny tena mifaninana ny teny fanalahidyo ary mifaninana amin'ny marika lehibe kokoa, dia mety hisy fiantraikany amin'ny laharanao izany indraindray.
Ny orinasa dia tsy maintsy mifantoka amin'ny teny fanalahidy lava-rambo tsy dia mifaninana kokoa na andian-teny manokana izay misy teny fanalahidy telo na maromaro. Na dia mety ho hitanao aza fa ny teny fanalahidy lava-rambony dia manana volam-pikarohana ambany kokoa isam-bolana, tsy dia mifaninana loatra izy ireo, izay manome anao vintana tsara kokoa amin'ny filaharana ao amin'ny Google. Azonao atao ny mampiasa Keyword Tool sy Google's Keyword Planner mba hamantarana moramora ireo teny fanalahidy lava-rambo tsy dia mifaninana izay manome lanja indrindra ho anao. raharaham-barotra.
Ny toerana dia manakiana na aiza na aiza, na dia ao amin'ny raharaham-barotra izao tontolo izao na ao amin'ny Google, raha manana ny laharana voalohany ny orinasa iray, dia manana vintana tsara kokoa izy amin'ny fahazoana mpanjifa, laza tsara kokoa ary sanda marika tsara kokoa. Indraindray ny laharana voalohany amin'ny tontolo ara-batana dia mety ho sarotra be fa amin'ny tontolon'ny nomerika miaraka amin'ny fikasihan'ny majika SEO sy tranonkala optimizations, ny sehatra misy anao dia afaka manana laharana ambony, eny fa na dia eo ambonin'ny mpifaninana an-tapitrisa dolara efa miorina tsara aza. Noho izany, ataovy ny tsara indrindra Hafanàm-po an-barotra ary paikady momba ny marika an-tserasera mba hahazoana fiverenana lehibe fampiasam-bola ary hitombo bebe kokoa ny anao raharaham-barotra tanjona.
Misoratra anarana amin'ny Newsletter ho an'ny fanavaozana farany, fihenam-bidy manokana ary maro hafa.
Paikady ara-barotra 11 ho an'ny fanombohana miasa
Apr 18 | Hafanàm-po an Transformation
Lisitra momba ny fampiharana HRMS: Inona no tokony hodinihinao ary inona no angona ilaina
Apr 13 | Hafanàm-po an Transformation
Manova ny fivarotanao an-tserasera: ny fomba SEO dia fanampiana lehibe ho an'ny fitomboana
Apr 8 | Hafanàm-po an Transformation